6G Pipe ịgbado ọkụ: Gịnị Mere na Midwest US Mkpa Steel Mills Ime Pipe? - China Qingdao Haokun Machinery
Gburugburu Pipe Mill
Edge igwe Machine
Agwụ Beveling Machine
ERW (Electro-emegide welded) Pipe Line
6G Pipe ịgbado ọkụ: Gịnị Mere na Midwest US Mkpa Steel Mills Ime Pipe?
Gịnị mere na-akpa ọhụrụ ígwè mills ke isua 30-eme anwụrụ?
Ọ bụ n'ihi na dị nnọọ ka na Beverly Hill Billbillies, ochie Jed bụ a nde. Ọ bụrụ na ị na-na na a ọrụ ugbo n'ebe ndị dị ka North Dakota, Eastern Montana, akụkụ nke Wyoming, Pennsylvania, na ndị ọzọ na States, i nwere ike na nso nso tinyere ala n'ọgụ. N'ihi gịnị? Ọ bụ n'ihi na shale mmanụ a chọpụtara n'ebe niile, gụnyere Jed itie. Ha na-eme anwụrụ na ọhụrụ wuru ígwè mills n'ihi na ha nwere na-na mmanụ anya Ol 'Jed n'ugbo.
Maa onye na-etinye na anwụrụ ọnụ?
I kwutere ya, ọjà welders. N'ụzọ dị mwute, ịgbado ọkụ anwụrụ na-ewe a pụrụ iche ịgbado ọkụ nkà - i nwere ịmụta ịgbado ọkụ na 6G ọnọdụ nke bụ a ule na nkwonkwo na a ofu 45 ogo ọnọdụ, nke na-akpata na ị ga-Weld na fọrọ nke nta ka ọ bụla ọnọdụ kwere omume. Ma i nwere ike ọ bụghị naanị getter tinye ọnụ. Ị ga-enwe ike ruo X-ray nnyocha gị welds. Ọ dabara nke ọma, ma ọ bụrụ na i nwere ike ime nke a, ị merie. Na North Dakota anwụrụ welders na ha onwe ha welder na ha onwe ha ụgbọala na-eme $ 70 awa.
Olee otú ogologo ga ọganihu maka anwụrụ welders adịru?
Ụgwọ ọrụ ridaworo n'oge ngwa ngwa ala na aku na uba. A rig welder na tar ájá nke Canada (ha wepụ mmanụ si ájá n'ebe) averaged $ 330,000 a afọ, dika na American ịgbado ọkụ Society Magazine, October, 2007. Otú ọ dị, ugbu a ina anwụrụ welders na-amụba, na oge a, enweghị ọgwụgwụ n'ime anya, n'ihi ọtụtụ ihe.
Gịnị ga-ina anwụrụ welders n'ihu?
The USA bụ na a Pịkụl na anyị kuki ite. Anyị na-enweghị ihe ọ bụla ego, na anyị ji ego dị ka crazy. Mgbe ị na-ekpochi a ụlọ nke na-egosi na ọ dịghị ụzọ - mgbe mberede, a ụzọ ga-emepe, ihe ị na-eme? Ị-agba ọsọ site na ụzọ, ọ bụghị ya? Site na-ịbịa anyị mmanụ na gas si n'ala, anyị nwere ike atụgharị USA gburugburu, na ike na-abụ ịma ya. Ya mere, n'agbanyeghị ihe ị na-anụ banyere mmanụ na gas ịbụ na n'oge gara aga, jide jidesie gị okpu, n'ihi na oké mgbanwe na-efe, na megidere nkwenkwe, ọ na-adịghị na-atụgharị ifufe mills .. The US ga-aghọ ndị kasị ibu n'ụwa emeputa ihe nke mmanụ eke gas anya.
Gịnị banyere anyanwụ na ifufe?
Na-amasị m green technology. M a journeyman ọkụ eletrik, na m na-aghọta ya. The ụbọchị ga-abịa mgbe anyanwụ na-eleghị anya ifufe ga-eme ka a akụkpọ, ma ọ ga-abụ a afọ iri ma ọ bụ 3 site ugbu a. N'ihi gịnị? Ọtụtụ ndị adịghị aghọta na nnukwu ina ume, na otú anyanwụ ọ na-ewe iji mee ka a obere bit nke na ọkụ eletrik. Ị nwere ike ịzụta a 45 watt anyanwụ usoro maka banyere $ 300. Nke ahụ ga-amụnye banyere 3 ezigbo sized ikanam bulbs, na nke ahụ bụ ihe magburu onwe ya, na a nnukwu mma karịrị afọ iri gara aga na mbụ na-eri, na nkà na ụzụ.
Otú ọ dị, ihe electric oven ime kuki na-achọ banyere 4,500 watts. Nke ahụ bụ otu narị, 45 watt anyanwụ usoro ma ọ bụ $ 300 x 100 = $ 30,000. Ugbu a, ka ndị na ntụ oyi na n'otu oge ị na-mmiri ndị kuki, na ọ ga-mkpa ọzọ 4,500 watts, na anyị na-dị nnọọ ibido.
Anyị kwesịrị mmanụ, na anyị kwesịrị ya ugbu a. China na-aṅụ mmanụ dị ka a mmiri ara ehi shake, na ọ ga-akwụsị. Ọ bụrụ na ị chọrọ a oké ọrụ, na-aghọ a top anwụrụ welder. Ọ bụghị ihe niile ịgbado ọkụ na-akwụ ọma. Kasị welders gaa ụlọ akwụkwọ a di na nwunye nke afọ, na-amụta a ụyọkọ stof ha ga dịghị mgbe na-eji, ma na-araparawo ala-akwụ ụgwọ ọrụ. All na mgbe, ha na-amaghị na ọ bụrụ na ha dị nnọọ ịmụta nke a otu nkà na ihe ọ bụla ọzọ, ha ga-enwe ike ime ka ezigbo ego n'ihi na ike nke ọrụ ha.
Pipe ịgbado ọkụ bụ n'aka anya nchikota. Ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ị nwere ike ma na ọkụ a na-akpata, na a na-ekpo ọkụ ngafe ga metara, ma ọ bụ i nwere ike ọ bụghị. Pipe ịgbado ọkụ na-adịghị na-agụ, na-ede ma ọ bụ ná mgbakọ na mwepụ. Ọ dịghị onye na-eche banyere ma ọ bụrụ na ị na mgbe gara ọ bụla n'ụlọ akwụkwọ nke ụdị ọ bụla, ma ọ bụrụ na i nwere ike Weld ọjà.
Chee echiche banyere ya. Gịnị akwụkwọ mere Agu Woods-aga? Onye ma? Onye chọrọ ịma? O nwere ike see obere obere bọl ke onu mma karịa ọtụtụ onye ọ bụla ọzọ n'ụwa, otú ọ dịghị onye na-eche banyere ebe ọ na-aga akwụkwọ. Pipe ịgbado ọkụ ga-eme ka ị na-a golf kpakpando, ma ị na-ahụ echiche - nanị ihe na-dị mkpa bụ nanị ihe na-mkpa, ọ bụghị ya?
6G Pipe ịgbado ọkụ: Gịnị Mere na Midwest US Mkpa Steel Mills Ime Pipe? Njikọ Video:
With our abundant experience and considerate products and services, we have been recognized to be a reputable supplier for a lot of global consumers for Testing Machine , Cross-Ịcha 2000x25.4 , ịgbado ọkụ Pipe Machine , We warmly welcome your patronage and will serve our clients both at home and abroad with products and solutions of superior quality and excellent service geared to the trend of further development as always. We believe you will benefit from our professionalism soon.
Mba 20 Taishan Road, Industrial Mpaghara Of Jiulong Town, Jiaozhou City, Qingdao, Shandong Province, China